पूर्व महिला लडाकूको पीडाः सानै उमेरमा जनयुद्धमा होमियो, अहिले सडकमा ल्याएर छोडिदिए « Rara Pati
काठमाडौं । कक्षा ७ मा पढ्दै थिइन् । भर्खरै १२ वर्षकी थिइन् । किशोरावस्थाले छोइसकेको थियो । बालापनको सौख पूरा गरेर किशोरावस्थाको यौवन चढिसकेको थियो । स्कुलमा पढ्नुभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापमा बढी ध्यान जान्थ्यो । अर्कोतिर तत्कालीन समय पनि त्यस्तै थियो ।
कापीकलमबाहेक केही नदेखेकी शोभाको हातमा भारी हतियार थमाइयो । माओवादीले देखाएको सपना उनलाई आफ्नै सपना लाग्थ्यो । त्यही भएर उनले आफ्नो यौवनलाई नै धरापमा राखेर युद्धमा होमिइन् । ‘त्यो बेला त माओवादी के हो < जनयुद्ध के हो < भन्ने केही पनि थाहा थिइन् । रमाइलोका लागि माओवादीमा लागियो,’ शोभाले न्युज कारखानासँग भनिन् ।
२०६० सालमा उनी पहिलोपटक माओवादीमा लागेकी थिइन् । युद्ध लड्नका लागि कसरी हतियार चलाउने < दुश्मनको अगाडि अगाडि कसरी प्रस्तुत हुने ? जस्ता विषयमा उनलाई १९ दिन मात्र तालिम दिइयो । त्यसपछि उनी जनमुक्ति सेनाको पूर्णकालीन लडाकू भइन् ।
यतिबेला उनीमाथि घरपरिवारसँगै समाजको पनि प्रश्नको थुप्रो छ । अहिले के पायौं < के–के न हुन्छ भनेर गएकी थियौं, के भयो < आफ्नै जिन्दगी बर्बाद गरेर आखिर के पायौं ? घरपरिवारबाट बारम्बार आउने प्रश्न हो यो ।